शपथमा लतपत : हेर्नेलाई नै लाज « AayoMail
2021,15 May, 1:08 pm
केपी ओलीले हिजो फेरि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिंदा तोकिएको ढाँचाअनुसार ‘…….प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्झाउँदा पनि टेरेनन्, टारिदिए। त्यसमै राष्ट्रपति भण्डारीले चाहिँ किशोरसुलभ हाँसो फुत्काइन। राजनीतिक तानाबाना र षडयन्त्रमा ओली र भण्डारीबीच देखिने मिलिभगतमाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ ; यसले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामै आघात पुर्‍याउँदै आएको छ।
संघीयता र संसदीय लोकतन्त्रका मूल्यहरुमाथि ओलीले लगातार गर्दै आएको प्रहारलाई भण्डारीले साक्षी किनारामा सदर गर्दै आएको भन्ने त थियो नै। त्यसमाथि शपथजस्तो शब्द–शब्द, मर्म–मर्मले संवेदनशील विषयमा मनलाग्दी गरिनु हेर्नेकै लागि पनि लाज हो। आफ्नो इज्जतको ख्याल गर्न नसक्नेले देश र जनताबारे के सोच्न सक्ला? अहिलेकै भएकै, उदागिंएकै त्यही होइन?
पहिलो चरणका केही लाख भ्याक्सिन दिँदै गर्दा कार्यकर्तालाई सडक आन्दोलनमा उरालिरहेको केपी ओली सरकारले दोस्रो लहरमा अनपेक्षित संकटको ठक्कर भेटेको